Top 10 Gubidda cajalid Best Software for Windows
Drives Flash, kaydinta iyo daruur iyo drives adag dibadda ayaa si ba'an u saameysey isticmaalka ee DVDs iyo CD-yada jawi caadi ah. Dadka isticmaali flash drives in ay xogta ka mid PC wareejiyo kale ama samatabbixin shaqo si aan dhinac saddexaad via email iyadoo la kaashanayo kaydinta daruur. Xitaa dhabar jab weyn ka dib, gubashada disc dhamaad lahayn sababtoo ah waxay bixisaa gurmad jirka ah ee xogta aad waxaana jira fursado yar oo ah inay sii socoto xun marka la barbar dhigo drives flash iyo drives adag dibadda. Maanta waxaan eegi doonaa ay Softwares gubashadii disc ugu wanaagsan ee la heli karo.
Qeybta 1: Top 10 Best cajalid Gubidda Software
Qeybta 2: Xulashada More ah Advanced & Professional cajalid Gubidda Software
Qeybta 1: Top 10 Best Gubidda cajalid Software
1. 123 Copy DVD Gold
123 Copy DVD Gold waxaa loo arkaa software gubashadii ugu fiican disc heli karo hadda. Waxay bixisaa badan oo ka shaqeynayaan iyo raaxadeeda waxa ka mid ah cajalladaha ku gubanayso. Tani qalabeed disc indhaha u saamaxaaya in aad nuqul ka, la abuuro oo la wadaagin video, audio iyo macluumaadka kala duwan ee cajalladaha. Users ma u baahan tahay aqoon iyo khabiir ku Softwares gubashadii disc si ay u isticmaalaan 123 Copy si ay u gubaan xogta ay cajalladaha. Ayaa la bilaabay menu deg deg ah ku siinayaa fududahay in qalabka ay helaan iyo waxa ay qaadataa qasabno yar si aad u hesho disc xogta aad diyaar u ah.
Baro wax badan oo ku saabsan 123 Copy DVD Gold >>
2. Roxio abuura
Roxio abuura ma ahan oo kaliya software gubashadii disc ah halkii waa Suite ah oo dhan-in-ka mid ah warbaahinta in qoreysa abuurista, dib u habaynta iyo daabacaadda audio, video iyo sanamyadii. Marka laga reebo in ay Suite hal abuur leh, dadka isticmaala sidoo kale gubi karaa audio, video iyo xogta cajalladaha. Roxio abuura sidoo kale loogu badalo karaa dhaxalka audio sida Records floorka iyo cajalado cajalad in si qaabab digital si aad u badbaadin kartaa ururinta aad kombuutarka. Waa mid ka mid ah software gubashadii ugu feature disc hodan heli karo.
Badan oo ku saabsan wax abuura Roxio Baro >>
Sida magacaba ka muuqata, DVD MovieFactory Pro waa software gubashadii disc a filaayo in video iyo files audio. Users abuuri karaan, jeexid, nuqul oo gubi cajalladaha. Software ayaa sidoo kale loogu badalo karo files audio in si qaabab kala duwan iyo qaar ka mid ah awoodaha taageertaa Blu-ray sidoo. Interface waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan oo awood u leh inay gubi cajalladaha si fudud ayaa sidoo kale waxaa ay leedahay tixgelin.
Badan oo ku saabsan DVD MovieFactory Pro >> Baro
4. Nero Gubidda ROM
Nero Gubidda ROM waa mid ka mid ah Softwares gubashadii disc ugu isticmaalay si weyn adduunka. Waxaa laga yaabaa inay sabab u ahaa xaqiiqada ah in ay timaado pre-ku rakiban ee ugu laptops OEM iyo desktops laakiin sidoo kale sababtoo ah waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee dooxeen iyo cajalladaha gubanaya. Waxay bixisaa heshiis weyn ee gacanta si user ah halka gubanaya DVD. Users Advanced tweak kartaa dhammaan goobaha si aad u hesho natiijada ay doonayaan. Nero Gubidda ROM waa lagu kalsoonaan karo oo ammaan ah iyada oo mid ka mid ah natiijada oo tayo fiican gubashadii disc.
Baro wax badan oo ku saabsan Nero Gubidda ROM >>
Cyberlink ka dhigaysa kala duwan oo ay ka mid yihiin Softwares webcam, shidmaan warbaahinta iyo gubashadii disc. Power2Go waa u fududahay ah in la isticmaalo qalab oo laga heli karo ee ugu laptops OEM sida default. Interface The fudud iyo habka fudud u software ugu fiican ee bilowga ah ka dhigaysa. Waxa kale oo dalka buuraha leh karaa images ISO ma sidaas u baahan tahay in aad ku gubi disc haddii aad rabto in aad si ku meelgaar ah ay u helaan xogta. Waxa kale oo ay taageertaa dhammaan noocyada kala duwan ee ay ka mid yihiin cajalladaha Blu-ray. Users abuuri karaan audio, video iyo files xogta la isticmaalayo Power2Go.
Baro wax badan oo ku saabsan Cyberlink Power2Go >>
6. Express Gubashada
Gubashada Express waa software oo dab ka ololayo disc anfacaya qiimo ah la awoodi karo. Software waxa uu leeyahay awood u leeyahay inuu abuuro xog, audio iyo cajalladaha video on DVDs iyo sidoo kale Blu-ray. Shaqeynta Blu-ray waxaa ku koobnayn oo kaliya laakiin Express Burns badalo karo files audio in si qaabab kala duwan cajalladaha xogta. Waa ay fududahay in la isticmaalo oo lagu kalsoonaan karo, laakiin haddii aad rabto in aad wax taageero farsamo ka dibna aad leedahay si aad u iibsato ah qorshe taageero dheeraad ah taas oo khasaare weyn ee software-ka.
7. Khamriga 120%
Alcohol 120% waxaa inta badan lagu yaqaan kordhaya files MD5 si ay u helaan xogta laakiin waa software gubashadii disc ah iyo sidoo kale. Marka gubashada disc, Khamriga 120% ma bixiyaan wax badan oo ka shaqeynayaan oo waa yara adag tahay in ay u isticmaalaan user celcelis ahaan. Waa weyn u cajalladaha koobiyeynta laakiin aan sidaas u weyn oo loogu abuuro cajalladaha cusub ka xoq. Users heli doonaa qasan by interface adag gaar ahaan marka ay doonayaan in ay gubaan ama nuqul disc maqal ah.
Badan oo ku saabsan Khamriga 120% >> Baro
Slysoft CloneCD leeyahay naqshado ugu fiican marka ay timaado Softwares gubashadii disc laakiin shaqeynta xaddidan ayey tartan xoog ha. Waxa keliya oo kuu ogolaanaya in aad nuqul ka audio iyo xogta cajalladaha in ay tahay. Shaqeynta kasta waxaa lagu soo bandhigay screen guriga taas oo ka dhigaysa in ay helaan wax u shaqeeyaan neecaw ah. La'aanta ah qaababka kale ma soo jiidan laga yaabaa in badan oo ka mid ah dadka isticmaala, laakiin haddii aad dooneyso in aad nuqulka audio iyo xogta cajalladaha markaas Slysoft CloneCD waxaa loogu talagalay adiga.
Baro wax badan oo ku saabsan Slysoft CloneCD >>
Blindwrite waa software gubashadii disc ugu jaban ee liiska oo sabab wanaagsan sidoo. Oo dhammu waa inuu bixiyaa waa naqilkii, akhriska iyo qoraalka cajalladaha. Waxaa lahayn qaababka dheeraad ah sida dooxeen audio, diinta audio ama taageero Blu-ray. Software waa fududahay in la rakibo iyo sida loo isticmaalo, laakiin mar kale ka shaqeynayaan xaddidan waa khasaare weyn. Habka nuqul wuxuu qaataa qasabno yar oo waa hab hortiisuu qummaati ugu dhaqaaqay si aan ku haysa doono wax dhibaato ah la isticmaalayo Blindwrite.
Baro wax badan oo ku saabsan Blindwrite >>
10. Pyro abuura Audio
Pyro abuura Audio waxaa filaayo in gubashadii disc audio. Wuxuu u qaybsan yahay in si afar meelood oo ka mid ah - Encoder, Ripper, Tagger iyo gubi. In kasta oo ay u qabata dhamaan hawlaha udadaalay laakiin design daran waa khasaare weyn. Interface user waa mid aad u xun oo gebi ahaanba hoos furteen sida haddii la sameeyey arday ka qalin cusub. Waxa aanu bixin oo dhan qaababka loo baahan yahay in software gubashadii disc laakiin design ka wayn waxaa hoos u dhaco, si hoose ee liiska.
Baro wax badan oo ku saabsan Pyro abuura Audio >>
Qeybta 2: Xulashada More ah Advanced & Professional cajalid Gubasho Software
Talinayo 2: Wondershare DVD Creator
Haddii aad raadinayso qalab ka dhigi kartaa shaqaalaha video cajalladaha dheeraad ah xirfad iyo qaabka Hollywood, ka dibna waxaan ku talinaynaa in aad Wondershare DVD Creator . Waxay leedahay faa'iidooyin gaar ah in ka badan qalabka gubashadii cajalid kor ku xusan oo dhan. Iyadoo arrimo yaabka leh dhisay-in aad DVD Menu, waxa aad awoodi kartaa in la abuuro disc ah cajiib badan abid. Geedi socodka Gubasho waa ka dhaqsi badan tahay sida aad ka filan in ka hor inta aadan u soo bandhigo xaq idinka soo hor jeedda.
Taageerada gubanaya videos in ku dhowaad video kasta oo caan ah sida AVI, MP4, MKV, MPEG, MOV, FLV, iwm
Guba videos in DVD disc ah xirfad leh 40 arrimo menu + xirfad loogu talagalay.
Shakhsiyeeyo videos iyo arrimo menu u doonaya ka hor cajalid gubanaya.
Aad loo sahlo in la abuuro slideshow sawir qosol badan si ay ula wadaagaan saaxiibada iyo qaraabada.
Sida loo Guba Video inay DVD cajalid la Wondershare DVD Creator for Windows (Windows 10 ka mid)
Ka dib markii ay soo degsado iyo ku rakibidda software this gubashadii cajalid Wondershare, kaliya jiidi oo hoos u files si aad u codsiga, ama guji "Import" on interface ka.
Guba Video inay DVD cajalid
Top 10 External DVD gubidda
Sidee si ay u gudbiyaan Super8 in DVD
Windows DVD Kan sameeyey aan shaqaynayn? Hel xalka halkan
> Resource > DVD > Top 10 cajalid Software Gubidda for Windows